DEG DEG: Chelsea oo heshiis cusub ka saxiixatay N’Golo Kante – Gool FM
(Chelsea) 23 Nof 2018. Chelsea ayaa si rasmi ah ugu shaacisay shabakadeeda maanta oo jimco ah in N’Golo Kante ay ka saxiixatay heshiis cusub ee gaarsiisan ilaa iyo 2023 si uu u sii joogo garoonka Stamford Bridge.
Maamulka kooxda Blues ayaa waxay soo afjareen rajada ay kooxo fara badan ee qaarada yurub ay ka qabeen saxiixa madaalaha khadka dhexe reer France ee N’Golo Kante.
N’Golo Kante ayaa wuxuu soo caga dhigtay garoonka Stamford Bridge sanadii 2016, isagoo kaga soo dhaqaaqay kooxdiisii hore ee Leicester City kadib markii uu kusoo hogaamiyay ku guuleysiga horyaalka Premier League.
Hadaba Chelsea ayaa go’aansatay in ay Kante ku abaal mariso heshiis gaarsiisan ilaa iyo 5 sano, kadib markii ay soo baxeen warar ku aadan in ay xiiseenayaan kooxo fara badan sida Barcelona iyo Paris St Germain.
Hadaba N’Golo Kante ayaa ka warbixiyay dareenkiisa kaga aadan heshiiskan cusub uu u saxiixay kooxda Chelsea wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan mustaqbalkeyga ciyaareed ku sii wato Chelsea, waa labo sano ee qurux badan, waxaana rajeenayaa inay imaan doonto wax intaas kasii badan”.
“Tan iyo markii aan halkan imid, si buuxda ayaan u fiicnaaday ciyaaryahan ahaan kubada cagta, waxaan ku guuleestay abaal marino badan ee aan waligey ku riyoonin, waxaan jeclahay magaaladan, waan jeclahay kooxda, waan ku faraxsanahay inaan halkaan joogo”.
Imise ayuu Kante mushaar ahaan u qaadanayaa Usbuucii iyo Sanadkii kaddib 5-sano oo Heshiis ah uu u saxiixay Chelsea....(Kante oo Koobaad galay)